October 2019 - खबरम्यागजिन
फोटोग्राफर : राजा कुरैसी कविहरू : वाचनमा दर्शक/श्रोता : श्रवनमा निर्णायक : सम्मानमा सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका कलाकारहरू : नृत्यमग्न आहा! कस्तो राम्रो कविता. कविता कृति विमोचन उपहार र ढुकढुकी एकसाथ विजेता मुस्कान
कालेबुङ, 21 नोभेम्बर: कालेबुङमा सम्पन्न भएको युवा कविता उत्सव ‘आहा कस्तो राम्रो कविता’-जलढकाकी स्मिता सोताङले जितिन्। प्रतियोगितामा सहभागी बनेका 96 जना कविहरूलाई पछि पार्दै स्मिता सोताङको कविता ‘रगतको गर्व’-ले प्रथम स्थान ओगट्न सफल बनेको हो। […]
October 18, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
चामलिङले एसकेएम पार्टीको सिक्किमलाई जिल्ला बनाउने त होइन भन्ने प्रश्न गर्दै उनको कुर्सीसँग सिक्किम र सिक्किमे जनताको अधिकार पनि बक्रि त भएको छैन के ? गान्तोक, 18 अक्टोबर। सिक्किमका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको उप चुनाउ […]
गान्तोक, 19 अक्टोबर। दक्षिण सिक्किमको पोकलोक कामाराङको आउँदो उप चुनाउलाई केन्द्र गर्दै युद्धस्तरमा सम्पन्न भइरहेको सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको चुनावी सभा समष्टिको कामराङ खेलमैदानमा सम्पन्न भयो। उप चुनाउको प्रचारप्रसार थाम्न ठिक अघि समष्टि स्तरीय चुनावी सभामा […]
गान्तोक, 19 अक्टोबर। सिक्किमका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रको उपचुनाउलाई लिएर अहिले प्रचार अभियान अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। भारतीय जनता पार्टीले यस उपचुनाउमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र 24 मार्ताम-रूम्तेक अनि 27 गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्ना उम्मेद्वारहरू खड़ा गरेको […]
छिमेकी राज्य बङ्गालको गोर्खाल्याण्ड समस्या समाधान गर्नको निम्ति सही र शरल बाटोको रूपमा सिक्किम दार्जीलिङ एकिकरणको पहल दुईवटा पार्टी एसकेएम र भाजपा गठबन्धनको प्रतिफल हुनसक्ने सम्भावना स्पष्ट भएको। गान्तोक, 18 अक्टोबर। भाजपा र एसकेएमको गठबन्धनलाई […]
गान्तोक, 18 अक्टोबर। गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रको निर्दलीय उम्मेद्वार दिले नाम्ग्याल बर्फुङ्पाले सिक्किमको अस्तित्व बचाउनको निम्ति यसपाली चुनाउमा आफूलाई मतदान गर्नुपर्ने अनि यो विषयमा जनताले बुझिसकेको दावी गरेका छन्। राजधानीमा चुनाउ प्रचारकै क्रममा पत्रकार सम्मेलन आयोजन […]
October 15, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
गान्तोक, 15 अक्टोबर। सिक्किम उच्च न्यायालयको नयाँ मुख्य न्यायाधीशको पदभार न्यायमूर्ती अरुप कुमार गोस्वामीले ग्रहण गरेका छन्। उनलाई नयाँ राजभवन परिसरमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा राज्यपाल गङ्गा प्रसादले पद अनि गोपनीयताको सपथ दिलाए। मुख्य सचिव […]
प्रशासनलाई शिखण्डी बनाएर एसकेएमले भयानक हिंसा गर्दैछः एसडीएफ
गान्तोक, 15 अक्टोबर। सिक्किमको प्रमुख विपक्षी दल एसडीएफले अहिले राज्यमा भइरहेको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रको उप चुनाउमा सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले प्रशासनलाई शिखण्डीको रूपमा प्रयोग गर्दै भयानक हिंसा र आतङ्क मच्चाइरहेको बताउँदै भारतीय चुनाउ आयोग, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई […]
आहा! कस्तो राम्रो कविताका लागि छानिए 15 कविता : को को छन् कवि?
October 4, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
कालेबुङ,4अक्टोबर आहा! क्या राम्रो कविता प्रतियोगिताका लागि 15 जना कवि छानिएका छन्। प्रतियोगिता सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग, जिटिएको सौजन्यमा साङ्ग्रिला रिडर्स क्लबद्वारा आयोजित हुन गइरहेको हो। साङ्ग्रिला रिडर्स क्लबका मनोज बोगटी अनि उमेश […]
विश्वभरिका शेर्पाहरूको सम्मेलन सिक्किममा
October 3, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
गान्तोक,3अक्टोबर। विश्वभरिका शेर्पा समुदायको भाषा धर्म र संस्कृतिको संरक्षणसँगै परस्परमा सहयोगको भावना विकास गर्दै वैश्विक स्तरमा शेर्पा जातिको उत्थानको निम्ति गठित जाम्बूलिङ शेर्वी थोक्पा (विश्व शेर्पा संगठन)-ले आगामी 8 अक्टोबरमा विश्व शेर्पा दिवस […]
गान्तोक,3अक्टोबर। दशैंको मुखमा ब्याङ्क उपभोक्ताहरूले आफैंले पसिना बगाएर कमाएको पैसा समेत निकाल्न खप्नु सास्ति खप्नुपरिरहेको छ। सिक्किमको राजधानी गान्तोकलगायत चारैवटा जिल्लाको प्रमुख शहरहरूमा जन सेवाको निम्ति खोलिएको ढोल पिट्ने ब्याङ्कहरूले उपभोक्ताको माग अनुरूप […]